Pachís 🎲 Tinye, kporie ma kpọọ site na Emulator.online
Parcheesi. N'anya site n'ọgbọ nke ndị mmadụ gburugburu ụwa, ihe ngwugwu bụ egwuregwu bọọdụ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ na ịdị mfe ya. Ka anyị hụ akụkọ ihe mere eme na ịmata banyere Parcheesi.
Parcheesi: Etu esi egwu nzọụkwụ site nzọụkwụ 🙂
Gịnị bụ Parcheesi? 🎲
Egwuregwu nke Parcheesi bụ egwuregwu bọọdụ nke na-achọghị mmeghe. N'ebe ọwụwa anyanwụ egwuregwu ọdịnala Ọ bụ mgbe niile nhọrọ dị mma iji mee ka ụmụaka na ndị okenye zukọta n'ụlọ ma ọ bụ n'èzí.
Iwu nke Parcheesi
Taịl nile enweghị ike ịlaghachi azụ, naanị ha nwere ike ịga n'ihu na usoro mgbochi, wee banye ụlọ ikpeazụ ị ga-atụgharị ọnụ ọgụgụ ahụ achọrọ.
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke na-apụta dị ukwuu karịa ihe dị mkpa na pawn na-akpali ọnụ ụzọ nke square ikpeazụ, ị ga-agagharị mbadamba ahụ otu oge ọzọ.
Ndị na-egwu egwu ha na-ewe otu ibe tụgharịa dais.
Iji wepu kaadị n'ụlọ ya ma ọ bụ igbe mbido, onye so na ya ga-enwerịrị nọmba 5 (n'ebe ụfọdụ nọmba 6). Ruo oge ahụ, ị ​​ga-anọrịrị n ’ebe ahụ ma nọgide na-agafe oge gị.
Nke isii bụ Grail dị nsọ nke Parcheesi, dịka ọ dị -enye ohere a mpempe iji kwalite 6 n'ámá na tụgharịa na dais ọzọ.
Ọ bụrụ na ị tụgharịa na dais atọ 6 na ahịrị, nke ikpeazụ pawn ịkwaga ga-abụ taa ahụhụ site na ịlaghachi n'ama mbido, ebe ndi pawn no na mbido egwuregwu.
Na Parcheesi, ọnweghị ihe karịrị iberibe abụọ ka ekwe ka nọrọ na otu square n’elu bọọdụ ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere iberibe abụọ n'otu square, e guzobere "ụlọ elu" ma ọ bụ "ihe mgbochi" ahụ na-egbochi ịgafe nke agba ndị ọzọ.
Ihe mgbochi nwere ike iwepu naanị onye okike ya. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ a tụkwasịrị 6 na ọnwụ, a ga-amanye ya ịkwatu usoro ya, na-ebugharị otu n'ime pawns na ụlọ elu ahụ.
Ọ bụrụ na mmadụ tụgharịa daịl ma mechie ebe otu enyi nọ, enyi a na-adịghị mma ga-alaghachi na mbido. A na-akpọ mmeghari a "rie onye iro".
Akụkọ banyere Parcheesi 🤓
Akụkọ ihe mere eme na-ekwu egwuregwu a ga - enye Parcheesi mụrụ na India ogologo oge gara aga, n'etiti narị afọ nke isii.
Akpọ Pachisi , a na-egwuri egwu ya na ama Ọgba Ajant , emi odude ke steeti Maharashtra.
Ihe nnọchianya mbụ ya pụtara na ala na mgbidi nke ọgba, nke bụ eji dị ka bọọdụ.
Ọchịchọ ịmata ihe bụ nke a n'ihi akụ na ụba ya na eserese ọgba ya nke oge gara aga Narị afọ nke abụọ BCTaa, ihe owuwu ụlọ a nke nwere oghere iri atọ na abụọ bụ UNESCO World Heritage Site. A ga-ahụrịrị ebe ndị njem na-aga India.
Ọchịchọ ịmata ihe ọzọ, nke edere n'akụkọ ochie, bụ ntakịrị ntakịrị "mmekọrịta" karịa eze ukwu India Jalaluddin Muhammad Akbar mepụtara igwu egwu Pachisi. Ihu ọma kere ndu nke egwuru-egwu, Na-ejizi ụmụ nwanyị si harem dochie ibe ya.
Parcheesi na aha ya di iche iche
Dị ka ihe niile dị mma na-e beingomi, na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, na ndị ọchịchị Britain, Pachisi weere nzọụkwụ mbụ ya na mba ọzọ.
Ndị Colonists si Alaeze Ukwu Britain mere ngwa ngwa iwebata egwuregwu ahụ na UK, ebe, mgbe ụfọdụ mmezigharị, akpọrọ aha ya Ludo (Latin maka "egwuregwu") wee si otú a mee ka ọ pụta ìhè na 1896.
Ihe amaara site na mgbe ahụ gawa bụ egwuregwu ahụ "pụọ" na, n'oge njem ahụ, Ludo na ndị iche ya nwetara nnukwu ewu ewu n'ọtụtụ mba nke ụwa, n'okpuru aha dị iche iche.
Dị ka ihe atụ, na Germany, a na-akpọ Ludo “Ewela iwe", Nke pụtara ihe dịka"Enyi ewela iwe”, Ma nwee aha nha anya na Dutch, Serbo-Croatian, Bulgarian, Czech, Slovak and Polish, ebe amara ya nke ọma China ("Ndị Chine (s) e").
Na Sweden, ọ bụ ama dị ka “Fia", Aha sitere na Latin okwu fiat, nke putara"ya dikwa".
Ọdịiche dị iche na aha ahụ bụ "Fia-spel"(Fia egwuregwu) na"Fia med knuff”(Fia na inupụ). Na Denmark na Norway, n'ụzọ zuru oke, aha Ludo ka dị.
Na North America, a na-akpọ ya dịka na Spain, Parcheesi. Ma enwerekwa ọdịiche dị iche iche nke ụdị dị iche iche mepụtara Ndo! na Nsogbu.
Na Spain, anyị niile maara ya dị ka Parcheesi.
Curiosities nke Parcheesi 🎲
Ruo ọgbọ niile
N'ihi iwu dịtụ mfe dị mfe icheta, egwuregwu nke Parcheesi dabara adaba afọ niile, na ụmụaka nwere ike igwu egwu ma ọ bụ soro ndị ọzọ nọ n’ezinụlọ. Ihe kachasịkarị bụ na ndị egwuregwu 2 ruo 4 na-egwu egwu, mana anyị na-ahụkwa ụdị dị iche iche na-egwu egwu abụọ ma ọ bụ karịa egwuregwu. N'okwu a, a na-agbakwunye agba ndị ahụ na-acha uhie uhie, acha anụnụ anụnụ, odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
N'ihi na ndị jisiri ike gafere enweghị mmasị na ihe ịtụnanya a na amaghị nke ọma ihe ọ bụ maka, ndị Parcheesi bụ egwuregwu mbadamba nke ndị egwuregwu 2, 3 ma ọ bụ 4 nwere ike ịkpọ (na nke a nwere ike ịbụ ụzọ abụọ).
Ogwe Parcheesi dị square ma gosipụta ya na obe, ya na ogwe aka ọ bụla nke obe nwere agba dị iche (na-abụkarị acha ọbara ọbara, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ).
Onye ọkpụkpọ ọ bụla kwesịrị ịme mpempe 4, akpọ "egoNainyinya”, Mezue gburugburu na bọọdụ ahụ wee rute na njedebe ikpeazụ tupu ndị ọzọ.
Dị ka? Na-egwu egwu! Nke ahụ ziri ezi, Parcheesi bụ egwuregwu chioma, mana na-atọbeghị ụtọ.
Egwuregwu abụọ a na-ahụkarị
Seen hụlarịrị na ịtụgharị bọọdụ na egwuregwu a gụnyere Egwuregwu nke ọgazị. Ọzọkwa site na ihu abụọ, Ma na a ubé dị iche iche imewe bụ anyị Parchis y Gloria Game. Site n'ike mmụọ nsọ site na akụkọ mgbe ochie dị ka “Ndanda na AhịhịaNaNkịta ọhịa na Oké Nkịtị”, Na-enye ụmụaka ohere ka afọ 3 nwee egwuregwu na egwuregwu abụọ. Iberibe ya dị ka ịnyịnya.